Xajka Suuq geynta micnaheedu waa Iskaashatada | Martech Zone
Xajka Suuq geynta macnaheedu waa Iskaashato
Isniin, November 5, 2007 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Blog-ka Andy, Xajka Suuqgeynta, waa waajib in la akhriyo in aan in muddo ah ka mid ahaa. Waxaan xasuustaa markii iigu horeysay Andy wuxuu tixraacay boggeyga - Si aan caadi ahayn ayaan u riyaaqay! Andy waa tusaale weyn oo ah meesha aan jeclaan lahaa in qoraalkayga iyo ganacsigeygu ay ahaadaan dhowr sano.
Waxyaabaha cajiibka ah ee ku saabsan baloog garaynta ayaa ah in taabashada shaqsiyeed ee had iyo jeer u oggolaataa aragti gaar ah. Aragti kasta oo u gaar ah, xitaa haddii ay isbarbar dhigaan midba midka kale, waxay siisaa dheelitirka macluumaadka ee aad ugu baahan tahay inaad ku gaarto go'aan qiime leh. Waxaan u maleynayaa inay tahay sida sanduuqa looxa oo kale… waxaad ubaahantahay xoogaa midabyo ah oo anfacaya hadaad runti rabto inaad sameyso sawir sax ah. Waxaan aqriyay Xajka Suuq geynta maxaa yeelay aragtida Andy wey ka duwantahay taheyga waanna awoodaa inaan waxbadan ka barto.
Tani waxay umuuqataa wax yaab leh dadka qaar. Miyaanay ahayn inaynu tartanno? Miyayna ahayn inaan isku dayeyno inaan midba midka kale ka xadayno akhristayaasha? Xaqiiqdii maya! Si ka duwan warbaahinta guud ee ay dadku iskaga tuuraan baararka midba midka kale oo aan joogsi lahayn, baloogyadu waa inay lahaadaan aad xiisaha wadnaha, maahan kuweena. Waan garwaaqsan nahay taas, xitaa haddii ay macnaheedu tahay in la jiido tartanka, waxay akhristayaashayada siisaa macluumaadka ay ugu baahan yihiin inay ku koraan Taasi waa qiime waana hufnaan, dhisida aaminaad dheeri ah iyo ka-horreysiinta akhristayaasha.
Dulucda sheekada: Haddii aad wax ka qorto qoraalkayga, waa inaad sidoo kale iska qortaa Andy's sidoo kale!
Xusuusin: Iskaashatadu kuma timaaddo dhiirigelin dhaqaale, sidoo kale. Waxaan rajeynayaa guuleysto $ 500 ee Andy ayaa halkaas bannaanka u dhigeysa! 🙂
Tags: Analyticsqorayaasha contentiibsaday contentwax iibsashadaqalab
PHP: Imisa maalmood ilaa Kirismaska?
Nov 5, 2007 saacadu markay tahay 3:24 PM
Qoraalka balooggan ayaa igu dhiirrigelin jiray maxaa yeelay waxaan ka shaqeynayaa sidii loo horumarin lahaa qaar ka mid ah degello cusub oo ay ka mid yihiin baloog. Wax yar baa layga baqay inaan bilaabo tartanka dartiis, laakiin waxaan aqriyay dhowr qoraal oo ay kujiraan kuwaaga kuwaas oo igu dhiiri galiyay inaan bilaabo. Waxaan u maleynayaa inay jirto meel ku filan oo loogu talagalay boggag badan oo tartamaya, waxaanan u baahanahay inaan xoogga saaro inaan sameeyo sida ugu fiican ee aan kari karo akhristayaasha. Sidan oo kale, balooggeygu si dabiici ah ayuu u guuleysan doonaa maxaa yeelay waa mid waxtar leh oo qiimo leh.
Nov 5, 2007 saacadu markay tahay 8:27 PM
Mahadsanid Doug! Waan ku raacsanahay, waxaa jira jacayl badan oo lagu wareego!